Learn professional English fast for school and employment while singing and having fun with friends.
ကျောင်းများအတွက် Professional English ကို သီချင်းများ သီဆိုခြင်းဖြင့် လျှင်မြန်စွာ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ သင်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Takeacatchy popular song, listen to the chorus over and over, repeat and sing again and again, and you'll be speaking English with no trouble at all. Your vocabulary grows and pronunciation comes naturally with each new popular song you sing.
လူကြိုက်များသော မြူးကြွသည့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ယူပါ။ နားထောင်ပြီး သံပြိုင် သီဆိုပါ။ ကြိမ်ကြိမ်သီဆိုပါ။ သင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုရာမှာ အခက်အခဲမရှိပဲ အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။ ဝေါဟာရများကြွယ်ဝလာပြီး သင်သီဆိုနေသော လူကြိုက်များသည့်သီချင်းများနှင့် သဘာဝအရ အသံထွက်လည်း တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။
Anyone of any age and from all walks of life can quickly improve their English through the rhythm and phrases found in popular music. Using proven techniques inspired by world renowned linguist Professor Noam Chomsky, we make learning as easy and natural by stimulating those specific cognitive areas of the brain with recursive phrases that all of us employed as infants when we first began speaking our native languages.
ကမ္ဘာကျော် ဘာသာရပ်ဆရာကြီး Professor Noam Chomask အသုံးပြုထားသော နည်းလမ်းအရ လေ့လာခြင်းဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်၏ မှတ်ဉာဏ်အစိတ်အပိုင်းကို လှုံ့ဆော်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကလေးသူငယ်များ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွုန်ုပ်တို့၏ တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားကို ပြောကြားကြားသကဲ့သို့ သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
Our employee training programs do more than teach English with each uniquely tailored to suit your project needs. Many students come from among the rural poor in Southeast Asia, and we provideatransformative force in their development. We provide core skills in personal development, proper behaviors such asafirm handshake, eye contact, straight posture, dress and grooming, politeness,abright smile and sense of humor.
Our focus is toward buildingasolid foundation for personal success as students learn behaviors and conduct expected of those providing international standards of service excellence.
ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းအစီအစဉ်သည် သင်၏ ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များနှင့် အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်စေမည့် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်းကို ပိုမို ပြုလုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းအစီအစဉ်မှ များစွာသော ကျောင်းသားများသည် အရှေ့တောင်အာရှ ဆင်းရဲသော ကျေးလက်ဒေသများမှ လာရောက်ကြပါသည်။ သူတို့၏တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျွနိုပ်တို့က အသွင်ပြောင်းလဲခြင်း အင်အားတစ်ရပ်ကို ပေးပါသည်။
ထို့ပြင် အနှစ်သာရကျသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်း ပေးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ မျက်စိဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ခန္ဒာကိုယ်​​ ဖြောင့်မတ်စွာ နေထိုင်ခြင်း၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်း၊ တောက်ပသောအပြုံး၊ ပျော်ရွှင်စွာနေခြင်း စသည့်တို့ကဲ့သို့သော သင့်လျှော်သည့် အပြုအမူများကိုလည်း သင်ကြားပေးပါသည်။ ကျွုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အောင်မြင်မှုအတွက် ခိုင်မာသော အခြေခံ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်သည့် အပြုအမူနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားများ၊ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ထားသည်များအတိုင်း ကျောင်းသားများကဲ့သို့ လေ့လာရန် ဖြစ်ပါသည်။
Stuart Alan Becker with Professor Noam Chomsky, April 2013
We train specialized work teams, department heads and their staff, helping all to work more effectively in their respective occupations. Past graduates have honed their skills in food and domestic services, hotel and office management, banking, finance, education and telecommunications.
Our institutional clients include multi-national corporations, private, religious, government and non-government organizations, with students ranging from corporate executives to monks and novices, and from pre-schoolers to retired teachers and pensioners.
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အထူးပြု သင်ကြားပေးပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအလိုက် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ကြားပေးပါသည်။ ဘွဲ့ရထားသူများအနေဖြင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပြီး အစားအသောက်နှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ ရုံးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ ပညာရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျွုန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတကာမှ ဖောက်သည်များတွင် ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်ဌာနများ၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘုန်းကြီး ကိုရင်များ၊ သုတေသီများ၊ အနားယူမည့် ဆရာ/မ များနှင့် ပင်စင်စား ဝန်ထမ်းများ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
“Stuart promisedatraining unlike anything experienced before and he was right. He plays the role of many characters, singing and engaging each student. Stuart's approach is cool, and the students get really involved. Even the most introverted of the group will join in with singing and talking. He covered topics specific to our industry, which is hospitality. We saw immediate results in terms of guest satisfaction, and our staff is now much more excited to speak with guests. His program will help our business for years, but most important, our staff had fun! ”
“Stuart(စတုဝစ်) ဟာ ယခင်က မပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ပြုလုပ်မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ သူမှန်ပါတယ်၊ သူ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီကို သီချင်းဆိုခြင်းဖြင့် character မျိုးစုံ ပြုလုပ်သင်ကြားပါတယ်။ Stuart ၏ချဉ်းကပ်နည်းက အေးဆေးပါတယ်။ ကျောင်းသားများကလည်း အမှန်တကယ် ပါဝင်ကြပါတယ်။ သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် စကားပြောခြင်းတို့တွင် တစ်ကိုယ်တည်း နေထိုင်တတ်သူများပင် ပါဝင်ပြောဆိုကြပါတယ်။ သူက ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းအတွက် အထူးခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ရှာတွေ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဖော်ရွေခြင်း ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဧည့်သည်များရဲ့ ကျေနပ်မှုက ရုတ်တရက် အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေက ယခုဧည့်သည်တွေနဲ့ စကားပြောဖို့ ပိုမို စိတ်လှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ရယ်စရာပြောတတ်နေပါပြီ။”
LYRICAL TRAINING CENTER
20/3 Natmauk 1 Lane
Tel: +959 973791749
Copyright © Lyrical Training 2017. All Rights Reserved